विमान दुर्घटनाअघि सान्तनाको ट्विट – ‘जति जीवन मैले बाँचेँ, ती सबैलाई माया गर्नेछु’ – America Nepal
विमान दुर्घटनाअघि सान्तनाको ट्विट – ‘जति जीवन मैले बाँचेँ, ती सबैलाई माया गर्नेछु’
सोमबार बिहान मात्र ब्राजिलको ‘ए’ डिभिजन क्लब चापाकोइन्सेका खेलाडी क्लब अध्यक्ष अल्भाडेर पेलिसारसँग बिदाई माग्दै भनिरहेका थिए, ‘हामीले एउटा सपना बुनेका छौं, जसलाई यथार्तमा परिणत गर्न जाँदैछौं।’
सन् १९७३ मा ब्राजिलको दक्षिणी सहर चापेकोमा चापाकोइन्से क्लब स्थापना गर्दा अध्यक्ष अल्भाडेरले थुप्रै सपना बुनेका थिए। यही सपना साकार पार्ने क्रममा क्लब २०१४ मा पहिलो श्रेणीमा उक्लिएको थियो। अझ गत साता अर्जेन्टिनाको बलियो क्लब सान लोरेन्जोलाई पराजित गरेपछि चापाकोइन्सेको ख्याती देशभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि चुलिन थालेको थियो। किनकि, अर्जेन्टिनी क्लबलाई पराजित गरेर चापाकोइन्से ‘कोपा सुदामेरिकाना’ प्रतियोगिताका लागि छनोट भएको थियो। कोपा सुदामेरिकानालाई दक्षिण अमेरिकी फुटबलमा ‘युएफा कप’ हाराहारीको प्रतियोगिता मानिन्छ।
यही लिगअन्तर्गत पहिलो चरणको ‘अबे’ खेल खेल्न कोलम्बियातर्फ उड्नुअघि विमान समात्न चापाकोइन्सेका खेलाडी बोलिभियाको राजधानी सान्ताक्रुज पुगेका थिए। ब्राजिलको उड्डयन मन्त्रालयले बोलिभियाको विमानलाई साओ पाउलो आउन स्वीकृति प्रदान नगरेपछि क्लबका सबै सदस्य क्लबले चार्टर गरेको बेलायती बिमान ब्रिटिस एरोस्पेस–१४६ समात्न छिमेकी देश बोलिभिया लागेका थिए।
कोलम्बियातर्फ लाग्नुअघि खेलाडीहरूले विमानस्थलमा खुब मस्ती गरेका थिए। कोलम्बियामा चापाकोइन्सेले त्यहाँको दोस्रो ठूलो सहर मेडलिनमा स्थानीय एट्लेटिको नासियोनलविरूद्ध खेल्ने कार्यक्रम थियो।
विमान आकाशमा हुँदा खेलाडीहरूले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा विभिन्न तस्बिर र सन्देश छाडेका थिए। जसमा सबैभन्दा रोचक सन्देश डिफेन्डर एलन रुस्चेलको थियो। उनले क्लबका गोलकिपर मार्को डानिलोसँग खिचेको फोटो पोस्ट गर्दै लेखेका थिए, ‘म आउदै छु! कोलम्बिया।’
मंगलबार उनी कोलम्बिया त पुगे। तर, फुटबल मैदानमा नभई चोटग्रस्त हिप र टाउको बोकेर मेडलिन सहर नजिकै रहेको ला सेजा अस्पतालमा। मंगलबार स्थानीय समयअनुसार बिहान ५ बजे भएको विमान दुर्घटनामा टोलीका २२ सदस्यीय खेलाडीमध्ये २० जनाको ज्यान जाँदा उनी जीवित बचे। दुर्भाग्य, उनीसँगै विमानभित्र फोटो खिचाएका गोलकिपर डानिलोको भने निधन भयो। रुस्चेलसँगै उनलाई पनि जीवित उद्धार गरिएको थियो। तर, अत्याधिक रक्तश्रावका कारण उनले अस्पतालमा अन्तिम सास फेरे।
एलन बाँचेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनकी श्रीमति अमन्दा रुस्चेलले भगवानलाई धन्यवाद दिइन्। र, भनिन्, ‘एलनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर छ। अन्य सबै खेलाडीको पनि सकुशल उद्धारको प्रार्थना गर्छु।’ तर, अमन्दाले प्रार्थना गरेजस्तै टोलीका अन्य सदस्य फर्किएर आएनन्, अर्का गोलरक्षक ज्याक्सन राग्नर फोलमन बाहेक। दुर्घटनामा फोलमनलाई पनि कोलम्बियाली सुरक्षाकर्मीले सकुशल उद्धार गरेका थिए। यो घटनामा २० खेलाडीको निधन भयो, जसमा क्लबका प्रशिक्षक लाइयो जुनियर पनि थिए।
लाइयो गत वर्ष मात्र चापाकोइन्सेमा प्रशिक्षकको भूमिकामा अनुबन्धित भएका थिए। कुनै बेला ब्राजिलका पूर्व प्रशिक्षक लुइस फिलिप स्कोलारीको मातहतमा ब्राजिलबाट फुटबल खेल्ने गरेका ५१ वर्षे लाइयोको क्लब आगमनसँग चापाकोइन्सेले ठूलो प्रगति गर्दै थियो। उनले क्लबको वर्तमान सफलतालाई इङ्लिस प्रिमियर लिग च्याम्पियन लेस्टर सिटीसँग दाँजेका थिए। र, उनको विश्वास थियो, क्लबले यस वर्ष ठूलै फड्को मार्नेछ।
नोभेम्बर २९ मा अर्जेन्टिनी क्लबलाई पराजित गर्दै कोपा सुदामेरिकानाका लागि छनोट भएपछि उनले आफ्नो ट्विटरमा एउटा सन्देश पोस्ट गरेका थिए, ‘आज मर्नु पर्यो भने म हाँसीहाँसी मृत्युवरण गर्न तयार छु।’
उनले आफ्नो ट्विटरमा सन्देश छाडेजस्तै मंगलबार मेडलिन शहरको केरो गोर्डेनस्थित पहाडमा विमान दुर्घटनामा उनको पनि निधन भयो। तर, विमान दुर्घटनामा उनको शव चिन्न सबैलाई गाह्रो पर्यो। २२ खेलाडी, २२ पत्रकार, ९ विमान कर्मचारी लगायत अन्य गरी कुल ८२ जना बोकेर उडेको विमान विद्युतीय गडबडीका कारण दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो।
विमानमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूमध्ये सम्भवत सबैभन्दा छिटो मृत्युको आभाष पाउनेमा अनुभवी स्ट्राइकर क्लेमर सान्तना थिए! स्पेनिस क्लब एट्लेटिको म्याड्रिडबाट व्यवसायिक फुटबल खेलिसकेका यी स्ट्राइकरले मर्नुअघि विमान भित्रबाटै ट्विट गरेका थिए, ‘जति जीवन मैले बाँचे, ती सबैलाई माया गर्नेछु।’
विश्व खेलकुदलाई नै स्तब्ध पार्ने यो घटनाका कारण पाँचपल्ट विश्व कप जितिसकेको ब्राजिली सरकारले तीन दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। यो घटनालाई लिएर विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि स्तब्ध छ। ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेइमारले भनेका छन्– ‘यो पत्यार गर्न गाह्रो पर्ने घटना हो।’
विश्व फुटबलका ४ ठूला विमान दुर्घटना
१९४७ मे ४– पोर्चुगलको बेनिफिका क्लबसँग लिस्बनमा खेल खेलेर फर्किने क्रममा इटालियन च्याम्पियन क्लब टोरिनोका खेलाडी विमान दुर्घटनामा परेका थिए। जसमा ३१ जनाको ज्यान गएको थियो। क्लबले प्लेइङ सेटको आफ्नो १८ जना खेलाडीलाई गुमाएको थियो।
१९५८ फेब्रुअरी ६– म्युनिख विमान दुर्घटना, जुन घटनामा म्यानचेस्टर युनाइटेड क्लबका आठ खेलाडी र तीन कर्मचारीको निधन भएको थियो। त्यतिबेला म्यानचेस्टर युरोपियन कपमा रेड स्टार बेलग्रेडलाई हराएर आफ्नो देश फर्किदै थियो। तर, म्युनिखमा तेल हालेर उडेको केही समयमै विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। यो घटनामा इङ्ल्यान्डले आफ्नो युवा प्रतिभा डङ्कन इडवार्डलाई गुमाएको थियो।
१९७९ अगस्ट ११– उज्वेकिस्तानको राजधानी तास्कनमा दुई विमान जुध्न पुग्दा भएको दुर्घटनामा १ सय ७८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। जसमा स्थानीय पाख्ताकोर क्लबका १७ खेलाडी र पदाधिकारीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु परेका थियो।
१९९३ अप्रिल २७– जाम्बियाको राष्ट्रिय टोलीको खेलाडी बोकेर एट्लान्टिक सागर माथिबाट उडिरहेको बिमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। जसमा ३० जनाको निधन भयो। विमान गाबोनभन्दा ५ सय मिटर टाढा दुर्घटनामा परेको थियो। जाम्बियाको टोली विश्वकप छनोटअन्तर्गत सेनेगलसँग खेलेर फर्किदै थियो।